GALMEEWWAN 264,968 MURTII ARGATANIIRU | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Sochii Galmee Manneen Murtii Oromiyaa Kan Baatii 6
Manneen Murtii Oromiyaa keessatti ji’oottan jahan darban keessatti galmeewwan 301,879 dhiyaatanii ilaalamaa kan turan yoo ta’u kanneen keessaa galmeewwan 264,968 ta’an irratti murti kennuun danda’ameera. Kunis, galmeewwan dhiyaatanii ilaalamaa turan keessaa kanneen xumura argatan %87.77 ta’uu agarsiisa.
Dhibbeentaan raawwii waliigalaa kun kan bara darbe yeroo walfakkaataa %82.40 waliin yeroo ilaalamu %5.37 dabaluu agarsiisa.
Galmeewwan akka waliigalaatti murtii argatan keessaa 246,824(%93.15) kan ta’an daangaa yeroo taa’ef keessatti murtii kan argataniidha.
Haala yaa’insa dhimmootaa yeroo ilaalamu walumaagalatti dhimmootni bara darbe yeroo walfakkaataatti sochii irra turan 283,672 yoo ta’u kan bara kanaa 301,879 dha. Murtii kan argatan ammoo kan bara darbee 233,741 yoo ta’u kan bara kanaa 264,968 dha. Kan sochiirra turan galmee 18,207 (% 6.41) kan murtii argatan ammoo galmee 31,227 (%13.56) dabaluu agarsiisa.
Gama biraatiin Labsii Manneen Murtii Aadaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuu fi Beekamtii Kennuuf Bahe Lakk. 240/2013 fi Dambii Labaicha Raawwachiisuuf Bahe Lakk. 10/2014 tiin Manneen Murtii Aadaa Jalqabaa 1880 fi kan Oldabarfataa 68 ta’an yeroo ji’a jahaa keessatti akka hundaa’an taasifameera. Manneen Murtii Aadaa Jalqabaa haaraa hundaa’an/beekamtii argatan dhimmoota 1008 simatanii 631 irratti furmaata kennanii jiru.